motorola inozivisa moto x yakachena edition marshmallow gadziriso yeverizon, sprint, uye nesu maseru
Kuru Nhau & Ongororo Motorola inozivisa Moto X Yakachena Edition Marshmallow yekuvandudza yeVerizon, Sprint, uye US Cellular
Vhiki rapfuura chete, takanzwa kuti Motorola yakanga ichitanga iyo soak bvunzo yeiyo Android 6.0 Marshmallow inogadziridza yayo yazvino Moto X Pure Edition, uye sezvanga zvichinyanya kuve tsika neMotorola, iyo soak bvunzo yaive nekukurumidza nekukasira zvinoita. Mumwe mushandi weMotorola akaenda kuGoogle + kuzivisa kuti Marshmallow kuburitswa kwatanga nemoyo wese kune vamwe vatakuri veUS.
Sekureva kwaDavid Schuster, director mukuru wesoftware chigadzirwa manejimendi ye Motorola, iyo Android 6.0 kuburitsa yatanga zviri pamutemo kune vashandisi veMoto X Pure Edition paVerizon, Sprint, uye US Cellular. Pamusoro pezvo, Motorola yatanga iyo Marshmallow soak bvunzo yeMoto X Play muBrazil neIndia, neMoto X Force muBrazil. Iko hakuna izwi pane dzimwe shanduro dzeMoto X Yakachena muUS.
Motorola haina & apos; haina chero akakosha maficha munzira yeiyo Android 6.0 yekuvandudza yezvishandiso, uye inonyora chete akajairwa Marshmallow maficha senge Doze, Iye zvino paTap, uye akareruka vhoriyamu ekudzora. Saka, kana paine munhu kunze uko ane Moto X Yakachena uye iwe ukaona iyo yekurova ichirova chako kifaa, tiudze isu mune zvakataurwa. Zvingave zvinonakidza kuona kuti kuburitsa kunotora nguva yakareba sei.
mabviro: Motorola Blog kuburikidza + David Schuster
inotakurika foto purinda ye iphone
zuva rebasa foni mbozha inobata 2019
Walmart inodzosera kumashure mitengo paApple iPhone 5s uye Apple iPad mini 2
Apple iri kuyambira vatengi kuti varege kuwira kune inozivikanwa iTunes chipo kadhi chisimba
Apple Tarisa SE 40 vs 44mm: ndeupi saizi iwe yaunofanirwa kuwana?
Samsung Galaxy S7 Edge vs Google Nexus 6P: kutanga tarisa
Ndeipi foni ine vakurukuri vakanakisa? iPhone vs Galaxy, OnePlus, LG, Pixel, ROG Nhare II bvunzo bvunzo
Joinha iro rima divi nekufanogadzirira Samsung & apos; s yakasarudzika Galaxy Note 10+ Star Wars Edition izvozvi